Burcad badeed u bandhigtay dowlada Hindiya inay ku bedelato 120 burcad badeed 46 lahaystayaal Hindi ah – idalenews.com
Burcad badeed u bandhigtay dowlada Hindiya inay ku bedelato 120 burcad badeed 46 lahaystayaal Hindi ah
Burcad badeed Soomaali ah ayaa u bandhigtay dowlada Hindiya inay ku bedeshaan 120 burcad badeed ah oo gacanta ugu jira dowlada Hindiya 46 badmaaxiin Hindi ah oo ay haystaan burcad badeeda,
Dowlada Hindiya ayaa doonaysa inay maxkamad saarto burcad badeedan Soomaaliyeed hase yeeshee bartamihii bishan ayaa waxaa soo gaaray akhbaarta ah in burcad badeedu diyaar la tahay inay sii daayaan 46 badmaax oo Hindi ah oo ay afduub u haystaan.
Maxkamada dalka Hindiya ayaan weli go’aan ka gaarin sida ay ka yeelayso dalabka ay soo gudbiyeen burcad badeeda.
Sida ay daabacday Times of India 120ka ruux ee Soomaalida ah oo loo haysto dambiyada burcad badeeda ayaa waxaa ka mid ah 16 si gaar ah loogu haysto inay dil geysteen.
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya dalka Hindiya burcad badeeda ayaa loo haystaa dambiyo ay ka mid yihiin inay dagaal ku soo qaadeen dalka Hindiya,afduub,ka ganacsi hub iyo rasaas,dil,isku day afduub iyo dambiyo kale.
120 burcad badeeda ah ayaa waxaa maxkamada lagu soo saarayaa magaalada Munbai ee dalka Hindiya iyadoo badankood lagu soo qabtay weeraro ay ku qaadeen ciidamada badda ee Hindiya. Lixdan kamid ah burcad badeedan ayaa la soo qabtay bishii Marso ee 2011 markii uu markab dagaal oo Hindiya laga leeyahay uu qabtay doon ay saarnaayeen.
Dhinaca kale wararka ka imanaya wararka ka imanaya dalka Mauritius ayaa sheegaya in 12 burcad badeed Soomaali ah maanta la soo taagay maxkamad ku taal dalkaas. Burcad badeedan ayaa laga soo duuliyay dalka Jabuuti waxaana aad loo adkeeyay ammaanka goobta ay ka dhacaysay maxkamadaynta burcad badeedan.
Xaakimkii qaadayay dacwadan ayaa dib u dhigay illaa iyo khamiista soo socota dhagaysiga dacwada loo haysto burcd badeeda Soomaalida ah.
Ciidamada isgarabsanaya ee dalka Mali oo fariisimo hor leh qabsaday